Fanaraha-maso ny vidim-bary : Hitsangana ny “task force” hanao fitsirihana -
AccueilSongandinaFanaraha-maso ny vidim-bary : Hitsangana ny “task force” hanao fitsirihana
Fanaraha-maso ny vidim-bary : Hitsangana ny “task force” hanao fitsirihana
04/12/2017 admintriatra Songandina 0
Tsy nitazam-potsiny nanoloana ny fidangan’ny vidim-bary eto an-drenivohitra ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy, fa nanome toky fa hisy ny fitsirihana ifotony hataon’ny ekipa manokana hivondronan’ny tompon’andraikitra anatina minisitera maromaro. Io ekipa “ task force” io, dia hidina hijery ny tahirim-bary sy ny mety ho fanafenam-bary ataon’ireo mpandraharaha, ka mahatonga ny fiarakan’ny vidim-bary eny amin’ny mpanjifa. Nandritry ny fidinana ifotony dia nijery ireo vahoaka sahirana tetsy Andavamamba no nanambaran’ny minisitry ny Mponina an’izany. “ Misy amin’ireo mpandraharaha mpanafatra vary no manafatra entana hafa, fa tsy vary akory no afarany”, hoy ny minisitra.
Antony iray hisian’ny tsy fahampian’ny vary eny an-tsena izany ka mahatonga ny fisondrotany.
Nihaona nivantana tamin’ireo mponina teny Andavamba moa ny minisitra tamin’io sabotsy io, ary tsy nisalasala nitaraina noho ny fiakaran’ny vidim-bary ireto vahoaka ireto. Satria tokoa, dia tafakatra 700 Ariary ny kapoakan’ny vary eny Andavamamba. Mandra-piandry ny asan’ilay “Task Force” vaovao hatsangana io moa dia nitondra izay voatsirambin’ny tanany entina hanampiana an’ireto mponina ireto ny minisiteran’ny Mponina. Nisy ny vary nozaraina tamin’ny fianakaviana miisa 400 tamin’izany. Hitsinjovana ny maitso ahitra ihany koa, dia hampitomboana ny hetsika asa tanamaro eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Mponina amin’iny tanànan’Andavamamba iny.
Androany no daty voatondron’ny avy ao amin’ny kaominina fa hanombohana ny tsenan’ny noely isaka ny boriborintany. Araka ilay fanapahana navoaka ihany koa dia tsy azo hivarotana eny Analakely mandritra izao volana Desambra izao, fa efa ...Tohiny